I-China Ethengiswa Kakhulu Embonini Yekhwalithi Yezimboni Yokukhiqiza Ingxube Yokupheka Yeplanethi Yeziko Ekhiqizako kanye Nefekthri |Shenlong
Igedlela elinejakhethi(i-cooker&mixer) lakhiwe ikakhulukazi umzimba webhodwe, umzimba osekelayo, isistimu enyakazayo, isistimu yokufudumeza, igiya lokulawula isivinini kanye nohlelo lokutshekisa ibhodwe.
Ngeketela/umpheki&i-mixer enejakhethi, sinezindlela zokushisisa zikagesi, umusi, igesi kanye nozibuthe kagesi ukuze sihlangabezane nezimfuneko ezihlukene zekhasimende.
Ukudala inzuzo ethe xaxa kubathengi ifilosofi yethu yebhizinisi;ukukhula kwekhasimende kuwumsebenzi wethu wokujaha i-Rapid Delivery for China Commercial Gas Soup Kettle with Jacketed Boiling Pan for sale, Sithembe futhi uzozuza okwengeziwe kakhulu.Qiniseka ukuthi ufika ukuze uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, sikuqinisekisa ngokuqwashisa kwethu okuhle ngaso sonke isikhathi.
Ukulethwa Okusheshayo Kwepani Yase-China, Igedlela Lesobho, Singanikeza amakhasimende ethu izinzuzo eziphelele ngekhwalithi yomkhiqizo nokulawulwa kwezindleko, futhi manje sesinohlu olugcwele lwesikhunta kusukela kumafekthri angafika ekhulwini.Njengokubuyekezwa komkhiqizo ngokushesha, siphumelela ukuthuthukisa izimpahla eziningi zekhwalithi ephezulu zamakhasimende ethu futhi sithole isithunzi esiphezulu.
1.Igedlela elinejakhethi lisebenzise ibhodwe le-hemisphere yensimbi engagqwali elakheke ngokuhlangene njengesikhwama, elihlangene kahle phakathi kwe-agitator nomzimba webhodwe ukugwema ukunamathisela ibhodwe.
2.Indlela eshukumisayo iwukuzungeza okukhethekile okutshekisayo, okwenza ukunyakaza kweplanethi nomzimba webhodwe ube nokuxhumana okwanele, uqaphela isilinganiso esingenayo inombolo ephelele yokujikeleza nokuphenduka, akukho angle efile enyakazayo.
3.isakhiwo esijikelezayo nesivala, ukugcina ibhodwe elingaphakathi lihlanzekile
4.Amandla okulawula isivinini se-variable-frequency Adopted, ukusebenza okuzinzile.Indlela yokuphakamisa i-Hydraulic ukuze ubone ukuthululwa kwe-hydraulic tilting ngemva kokuhlukanisa i-agitator nomzimba webhodwe namandla aphansi omsebenzi.
singakwazi ukukhiqiza umpheki&ingxube kusuka ku-200L kuya ku-600L, kanje imingcele yethu yobuchwepheshe:
Ngeketela/umpheki&i-mixer enejakhethi, sinamamodeli ahlukene, singayiklama ngokwezidingo zangempela zamakhasimende ethu.
Okwedlule: Ibhodwe leSandwich lamanani aphansi - Ingxube ethengiswa kakhulu Yezinga Lemboni Yeplanethi Yokupheka I-Planetary Cooker Mixer – Shenlong
Olandelayo: inzalo yokuvala inzalo ngokuzenzakalelayo yamanzi embonini yokudla okusemathinini nesiphuzo
I-Automatic Cooker With Mixer
I-Cooker With Mixer
Ibhodwe Lokupheka Nge-Mixer
I-Gas Heating Muti-Agitator Cooking Mixer
I-Gas Sauce Yokupheka Imbiza Yokuxuba
Igedlela Lokupheka Elinejakhethi elinemiksi
Igedlela Elifakwe Ijakhethi Nge-Mixer
Igedlela Lokuxuba Elinejakhethi
Igedlela Elifakwe Ijakhethi Leplanethi Nge-Mixer
Ibhodwe Lokupheka Lokuxuba Iplanethi
Imbiza Yeplanethi Ene-Mixer
Ibhodwe Lokuxuba I-Steam